store Keeper Archives - Glory Assumption Space
Store Keeper – Male (5) Posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
အင်တာဗျုးအမြန်ဝင်ရမည်။ 1.	Store Keeper – Male (5) Posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရ (သို့) ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီး ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ •	အသက် (၂၀ - ၃၅)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	Computer Word, Excel ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Stock ထိန်းသိမ်းရာမှ Report တင်သည်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	စာရင်းသွင်းနိုင်ရပါမည်။ စာရင်းဇယားထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 8:15 AM – 5:30 PM ) •	ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ FMCG Trading Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Store Keeper – Male (5)Posts/လစာ- ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1.Store Keeper – Male (5)Posts/လစာ- ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်/စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
- Computer Microsoft Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Store Keeper – Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Engineering & Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Store Keeper – Male (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ကျပ် / သင်္ကန်းကျွန်း မြီု့နယ်။ - ဘွဲ့ရ(သို့)ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ -Computer Excel အသုံးပြုနိူင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကားမောင်းတတ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - စနေနေ့တ၀တ်နှင့်တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Store Keeper – Male (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အထပ်သားစက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Store Keeper – Male (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ကမာရွတ်မြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - Ground Stock ကောက်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - Computer Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် ၇ နာရီမှ ၆ နာရီထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ -Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Store Keeper –Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Store Keeper –Female (5)Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ -Store အပိုင်းနှင့် Experience ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ -လမ်း 50 ရုံးတွင် အလုပ်ဆင်းရမည် ။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Storekeeper for Warehouse – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Storekeeper for Warehouse – Female (5)Posts/ လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ -Graduate -Aged minimum 24 and above -Must be able to use email, excel, word -Must have minimum 1 years and above experience in related industry
Store Keeper - Male(5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Store Keeper – Male (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၀ မှ ၃၀ ကြားဖြစ်ရမည်။ - စာရင်းဇယားပိုင်နိုင်ပြီး ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းသိုလှောင်မှု လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစား၍ အလုပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် (၈:၃၀ ) မှ (၅:၃၀) မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Store Keeper – Male (5Posts)/ လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်သာယာမြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ Painting Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Store Keeper – Male (5Posts)/ လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်သာယာမြို့နယ် •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၁နှစ်ဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	အသက် ၃၀နှစ် အောက်များလျှောက်ထားနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင်(အင်းစိန်လမ်းမကြီး) ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Store Keeper –Male (5) Posts /Salary- 150,000 Kyats
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Store Keeper –Male (5) Posts /Salary- 150,000 Kyats/ Hlaingtharyar Township - ဘွဲ့ရ။ - အသက် ၂၁-၃၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ - Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။(Microsoft Office) - သတ်မှတ်ထားသောအလုပ်ချိန် (အဆိုင်း)ဆင်းနိုင်ရမည်။ - လှိုင်သာယာမြို့နှင့်အနီးတဝှိက် ဦးစားပေးမည်။ - လိူင်သာယာစက်ရုံတွင် အလုပ်ဆင်းရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-263119775, 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
1.Store Keeper – Female (3)Posts/Salary-200,000 Kyats above
Salary Rang : 150000 - 250000
1.Store Keeper – Female (3)Posts/Salary-200,000 Kyats above/ Hlaing Thar Yar Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၅-၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၁ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223784 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Store Keeper –Male (12) posts
Store Keeper –Male (12) posts/ Salary-150,000 Kyat / Kamayut Township - ဘွဲ့ရ - အသက် (35) နှစ်အောက် - စတိုအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Store Keeper -Male/Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Store keeper – Male/Female (5) Posts / Salary 150000 Kyats / Lanmadaw Township Requirements - Computer Basic ရရမည်။ - Experience အနည်းငယ်ရှိရမည်။ - နယ်သွားနိူင်ရမည်။ - အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း ၁၀တန်းအောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_368" align="alignnone" width="4000"] Jobs Hailer ingJob Ads Recruitment And Vacancies[/caption]
Store Keeper - M/F (10) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Store Keeper – M/F (10 )Posts/Salary – 150000 Kyats / Lanmadaw Township - ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Basic ရရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ - နယ်သွားနိုင်သူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Store Keeper Male(5) Posts
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက်(၂၀)မှ(၃၀)နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။ - စာရင်းဇယားပိုင်နိုင်ပြီး ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းသိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)ရှိရမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစား၍ အလုပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223784 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Store Keeper - Males (2) posts
ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ Store ပိုင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ အလုပ်ကြိုးစား၍ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။